हङकङमा आज कोरोनाको ३८ नयॅा केश थपिए ४ वटा अज्ञात स्रोत - Gulmeli Online TV
हङकङमा आज कोरोनाको ३८ नयॅा केश थपिए ४ वटा अज्ञात स्रोत
२१ पुष २०७८, बुधबार १५:३७
हङकङ सेन्टर फर हेल्थ प्रोटेक्शन (CHP) ले आज साँझ ५ बजे पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी हङकङ सरकार प्रमुख कार्यकारी क्यारी लामले यसअघि नै महामारीविरुद्धको नयाँ उपायहरू घोषणा गरेकि छन।
CHP का डा. चुआंग शुक-क्वानले आज कुल ३८ नयाँ कोभिड-१९ केस थपिएको र आज २० भन्दा बढी प्रारम्भिक केसहरू रहेको बताए। त्यहाँ ४ स्थानीय केसहरू अज्ञात स्रोतहरू छन् वा आयातित केसहरूसँग सम्बन्धित हुन सक्छन्। उनले तुन मुनको सुइ निङ गार्डेनमा बस्ने ४२ वर्षीय पुरुष बिरामी, पुरुष सर्भेयर (केस नम्बर १२७६७) हरेक बिहान टुन मुनबाट बस चढेर भिक्टोरिया पार्कमा बस चढ्ने गरेको बताए। केस नम्बर १२७५४ पार्कमा अन्य २० जनासँग नाचिरहेको थियो र तिनीहरूमध्ये केहीलाई नयाँ नृत्य क्लस्टरको प्रकोपलाई सङ्केत गर्ने सङ्क्रमण भएको छ।
अधिकारीहरूले टुन मुनमा पुरुष बिरामी (केस नम्बर १२७६७) को संक्रमणको स्रोत खोजिरहेका थिए भनी उनले औंल्याइन्। PolyU द्वारा पूर्ण जीनोम अनुक्रमणिका अनुसार, यो सुरुमा केस नम्बर १२६७६ (अर्थात क्याथे प्यासिफिक उडान परिचर) सँग मिल्दोजुल्दो पाइयो। केस नं. १२६७६ आफ्नी आमासँग बस्ने भएकोले (केस नं. १२७५४), अधिकारीहरूले यो अन्य केसहरूसँग सम्बन्धित छ कि छैन भनेर निर्धारण गर्न जारी राख्नेछ।
डा. एडविन सुई, सेन्टर फर हेल्थ प्रोटेक्शनका नियन्त्रकले भने कि हिजो राति रिपोर्ट गरिएको धेरै नयाँ COVID-19 मामिलाहरू चिन्ताजनक थिए, र स्रोत केस नम्बर १२६७६, क्याथे प्यासिफिक उडान परिचरबाट आएको हो। हङकङ फर्किएपछि उनी आमासँग बसिन् । उनको आमालाई पछि निदान गरिएको थियो र उनको केस नम्बर १२७५४ हो। उनकी आमाको एक साथीले पनि प्रारम्भिक रूपमा सकारात्मक परीक्षण गरे। उनी ४८ वर्षीया महिला थिइन् जसले समय–समयमा नाच्ने र पार्टी गर्ने गर्थिन् र उनले भिक्टोरिया पार्कमा २० जनासँग नाचिन् । उडान परिचरकी आमासँग इन्डोनेसियाली घरेलु सहयोगी पनि छ जसले प्रारम्भिक रूपमा सकारात्मक परीक्षण गर्यो। भाइरस लोड धेरै कम छ। उनी हिजो अज्ञात स्रोतहरू भएको स्थानीय केस टुएन मुनमा बस्ने पुरुष सर्भेयर (केस नम्बर १२७६७) सँग सम्पर्कमा हुने सम्भावना बढी थियो। दुई जना भिक्टोरिया पार्कमा उपस्थित हुँदा २० मिटरको दूरी हुन सक्छ। यसलाई “लामो दूरीको सम्पर्क” मानिन्थ्यो।
केस नम्बर १२७५४ पनि जनवरी २ मा आफ्नो संक्रमित साथीसँग भिक्टोरिया पार्कमा रहेको हङकङ ब्रान्ड्स एण्ड प्रोडक्ट्स एक्सपोमा गएकी थिइन् ।
चुआङले यो पनि औंल्याए कि क्याथे प्यासिफिक फ्लाइट परिचरकी संक्रमित आमा (केस नम्बर १२७५४) जसले प्रारम्भिक रूपमा सकारात्मक परीक्षण गरेकी थिइन्, उनीसँग डिसेम्बर ३१ मा G/F, 1A Gordon Road, Tin Hau मा रहेको रेस्टुरेन्टमा बिहानको खाजा खाइन्। उनी सेरेन कोर्ट, टिन हाउमा बस्ने ५९ वर्षीया महिला हुन्। अक्टोपसको रेकर्ड अनुसार पुरुष सर्वेक्षक (केस नम्बर १२७६७) ले पनि सोही अवधिमा रेस्टुरेन्टमा खाना खाइरहेको थियो ।
Tsui ले यो पनि औंल्याए कि माथि उल्लेखित प्रसारण मार्गहरू ध्यान दिन योग्य छन्, विशेष गरी 42 वर्षीय मानिस जसलाई खोप लगाइएको छैन र टुन मुन मा बस्छन्। कामको आवश्यकताले गर्दा उनी हरेक दिन भिक्टोरिया पार्क हुँदै जान्छन् र उनी इन्डोनेसियाली घरेलु कामदारबाट कम्तिमा २० मिटर टाढा थिए। घरभित्र र बाहिरका विभिन्न क्रियाकलापबाट भाइरस सर्ने भएकाले नागरिक जाने ठाउँमा पनि यसले संक्रमण हुने गरेको उनले बताए । “जब नागरिक भिक्टोरिया पार्क हुँदै जान्छ, भाइरसको जोखिमलाई इन्कार गर्न सम्भव छैन।”
“त्यसैले हङकङवासी सबै नागरिकहरुले कोरोनाको नयॅा भाईरस संग खेलवाड नगरौ सचेत बनौ”
लण्डनमा एकै दिनमा १९४००० भन्दा बढि कोरोना संक्रमित